SEO-ga Luuqadaha badan iyo Meelaynta nuxurka ee WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/SEO-ga luuqadaha badan ku hadla iyo Meelaynta nuxurka ee WordPress
SEO-ga luuqadaha badan ku hadla iyo Meelaynta nuxurka ee WordPress
WordPress SEO iyo Multilingual SEO waxay isla tagaan si ay u gaaraan dhegaystayaal muhiim ah oo laga yaabo inay ku hadlaan ama ku hadlaan luqadaada. Waxaa jira dad aad u badan oo eega blogyada WordPress oo deggan dalal kala duwan. Haddii aad rabto in aad u waddo taraafikada boggaaga, ma seegi kartid xogtan muhiimka ah.
Marka loo eego cilmi-baarista suuqa ee hadda, sida muuqaalkan ee Harvard Business Review, shirkadaha caalamiga ah waxay ku tiirsan yihiin saldhigyada macaamiisha maxalliga ah ee dhamaystiran si loo xaqiijiyo ballaarinta caalamiga ah ee guuleysta. Macaamiisha maxalliga ah ee akhrinaya boggaaga ayaa faafin doona ereyga ku saabsan mareegahaaga. Haddii degelkaaga aan loo hagaajin suuqa bartilmaameedkaagu, saldhigga macaamiishaada cusub ma awoodi doonaan inay kula xiriiraan, iska daa balooggaga, adeegyadaada, ama alaabtaada.
Hagahan ayaa ku tusi doona sida loogu daro SEO-ga luuqadaha badan ku hadla si fudud, gaarista gobolo badan oo luuqado ah iyo eber ka dhigista luqadaha muhiimka ah ee blogkaaga WordPress.
Waa maxay SEO luqadaha badan?
Xudunta u ah SEO-ga luuqadaha badan ayaa ah baahida loo qabo suuq-geynta iyo hagaajinta waxa ku jira macaamiisha luqadaha kala duwan. Waxaad dhahdaa waxaad raadineysaa inaad beegsato luqadda Faransiiska. Kaliya maaha macaamiisha Faransiiska inaad u wanaajiso, laakiin sidoo kale Belgium, Ivory Coast, iyo 29ka waddan ee kale ee Faransiisku yahay luqadda rasmiga ah.
Xeeladahaaga SEO ee caadiga ah, waxaad u wanaajin lahayd waxa ku jira hal luqad. Iyada oo la adeegsanayo SEO-ga luqadaha badan, waxaad hagaajinaysaa macluumaadka loo heli karo luqado badan. Taasi waxay la macno tahay in goobtaada Ingiriisi ay u baahan doonto inay lahaato nooceeda Faransiiska ah. Markaa, SEO-ga ku hadla luqado badan ayaa noqon kara mid khiyaano leh. Laakiin abaal-marinteedu waa faa'iido maadaama aanad kordhinayn dhagaystayaashaada oo kaliya, waxaad sidoo kale ku jirtaa luuqad gaar ah ama gobol.
Halkan waxaa ah istaraatiijiyadda loogu talagalay bogga WordPress ee guuleysta ee luqadaha badan:
Website-ka luuqadaha badan: Istaraatiijiyadan gaarka ah ee SEO, waxaan ku bilaabeynaa sameynta website-ka isticmaalka luqadaha badan. Tan waxaa ka mid ah hababka farsamada sida:
hreflangNuxurka nuqul ka mid ah adiga oo aan wanaajinin gobolkaas la beegsanayo waa khiyaano. Ugu horreyntii, waxaad soo jiidan doontaa isticmaalayaasha leh baahiyo kala duwan. Isticmaalka hreflang, koodka farsamada ee dhammaan goobaha luqadaha badan. Waxaad ku dari kartaa hreflang tags gudaha WordPress. Adigoo isticmaalaya tan, waxay Google u sheegaysaa bogga uu u muujinayo gobol ama luqad gaar ah. Waxaad isticmaali kartaa summada hreflang, oo ah isku-dar luqad iyo gobol, si aad Google uga caawiso in boggaan darajado; Haddii kale, Google waxay u malaynaysaa inay tahay wax nuqul ah.
Soo saarista bogga: waxaad dooran kartaa bogga degitaanka ee ay marka hore arki doonaan, si aad halkan u beegsan karto labada gobol iyo luqadda.
Istaraatiijiyada Domain: waxaad dooran kartaa domain adiga kuu gaar ah, adigoo isticmaalaya ccTLD sida yourwebsite.ca ee goobta Canadian Canadian. Ama waxaad yeelan kartaa qaab-dhismeedka subdomain: tusaale ahaan, goobta Kanadiyaanka oo ay ku jiraan yourwebsite.com/en Ingiriisi iyo yourwebsite.com/fr oo Faransiis ah. Hubi in slugs-kaaga sidoo kale la turjumay.
Khariidadaha goobta luqadaha badan: Si Google-gu u gurguurto mareegahaaga, waxaad u baahan tahay khariidad goobeed si aanay u jahawareerin. Waxaad isticmaali kartaa plugin WordPress ah, kan kan oo kale ah, laakiin waxaad weli u baahan doontaa inaad beddesho khariidadda goobta. yoursite.com/sitemap.xml. Tani waxay u oggolaanaysaa Google inuu ogaado "Kani waa nooca [Faransiiska ama Isbaanishka] ee [mareegahaaga] ee Ingiriisiga"
SEO-ga gobollo badanQayb ka mid ah istiraatiijiyadda SEO ee luuqadaha badan ku hadasha waa xeeladda SEO ee luuqadaha badan. Tani waa marka dadka ku hadla Faransiiska ee ku sugan Ivory Coast ay ogaan doonaan in goobta loo beegsaday iyaga oo aan ahayn dalalka Faransiiska looga hadlo.
Xeeladaha SEOMa yeelan kartid SEO-ga luqadaha badan la'aanteed xeeladaha SEO.
Cilmi-Keyword: Sida olole kasta oo SEO ah, waxaad wali isticmaashaa cilmi-baarista ereyga muhiimka ah si waxa ku jira Google uu ugu darajeeyo mareegahaaga badan. Istaraatiijiyadda halkan waa in la ogaado ereyada muhiimka ah ee darajada sare ee gobolka luqadda aad beegsaneyso. Gobolka halkan waa muhiim, UK waxay lahaan doontaa su'aalo raadin oo ka duwan kan Maraykanka, inkastoo ay labadooduba ku hadlaan Ingiriisi.
Erayada Furaha ee La turjumay: aqoonsiga waxa uu bartilmaameedsadaa ereyada muhiimka ah, oo hubi in aad turjunto. Hubi in cabbirada, lacagaha, iyo odhaahyadu ay ku habboon yihiin gobolka luqadda aad ku turjumayso.
MetadataSharaxaada bogga, sawirka alt tags, iyo warbaahinta bulshada - Xogta badan ee sawirka (gaar ahaan xog-ururinta ama sawirada qoraalka ku jira) iyo darajada xogta badan ee warbaahinta bulshada sidoo kale ha ilaawin inaad dhigto ereyada muhiimka ah ee la turjumay halkan.
Translation: Markaa kaliya ma nuqulan kartid waxa ku jira, laakiin sidoo kale ma tarjumi kartid waxa ku jira. Istaraatiijiyad SEO ah oo caalami ah waa inay dejiso waxa ku jira si ay ugu habboonaato dhagaystayaasha la beegsanayo. Tani waxay la macno tahay inaad sameyso shaqada farsamada, sida horay loo sheegay, shaqada SEO, iyo shaqada luqadda. Afku wuxuu u baahan yahay inuu noqdo mid ku habboon kala duwanaanshaha dhaqameed ee gobol kasta, ereyada iyo weedhaha maxalliga ah ilaa gobolkaas iyo luqaddaas. Tusaale ahaan, ma odhan kartid "buenos días" goobtaada haddii aad beegsanayso isticmaalayaasha Argentine sababtoo ah, iyaga, waxay u tahay "buen día."
Meelaynta nuxurka: Waxa ku jira waa Boqor, markaa maahan kaliya inaad geliso ereyada muhiimka ah ee la turjumay oo ku dhaaf. Xogtaadu waxay u baahan tahay in sidoo kale la soo koobo, waana mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee istiraatiijiyadda SEO ee luqadaha badan. Bal hadda aan ka hadalno.
Waa maxay Degdeynta Mawduuca?
Meelaynta nuxurku waa habka lagu hubinayo in kuwa ku hadla afka hooyo ee afka la beegsanayo la waafajiyay sida luqadda isha. Tusaale ahaan, haddii aad Ingiriisi ka turjumayso oo aad Isbaanish ka turjumayso, waxaad hubinaysaa in dhagaystayaashaada Argentina, Spain, iyo Ingiriisigu si isku mid ah loo qaabilay. La'aanteed meelaynta nuxurka, waxaad gelaysaa suuq cusub si aad u balaadhiso ganacsigaaga adoon u muuqan inaad ogtahay baahiyaha macaamiishaada. Meelaynta nuxurku wax badan ayay ku leedahay buuxinta baahiyaha gaarka ah ee dhaqameed ee saldhigyada macaamiishaada. Haddaba, sidee ayaad tan u samaynaysaa?
Xaaladaha qaarkood, waxay la macno tahay wanaajinta waxa ku jira bogga hoyga. Qaar ka mid ah, waxay la macno tahay in macluumaadkaagu uu isku mid ahaan doono dhammaan mareegahaaga luqadaha badan, laakiin waxaad haysaa qoraallo blog ama qaybo warar ah oo u gaar ah dhagaystayaashaas.
Waa maxay Farqiga udhaxeeya Deegaanaynta, Dhexdhexaadinta, iyo Caalamaynta?
Qayb ka mid ah istiraatiijiyadda dejinta nuxurka ee guusha leh waa ogaanshaha farqiga u dhexeeya deegaan-dejin, dhex-dhigid, iyo caalamiyaynta. Markaa qabso qaamuusyadaada SEO, sababtoo ah waxaan ku dhowdahay inaan qeexno dhamaantood.
Waa kuwan farqiga u dhexeeya saddexda:
deegaamaynta – deegaanayntu waa habka laqabsiga nuxurka a deegaan gaar ah, ama daawadayaasha gaarka ah. Waxay ku saabsan tahay in la eego mareegaha, badeecada, ama adeegga, iyada oo loo marayo muraayadda dhegaystayaasheeda gaarka ah. Meelaynta nuxurku waa qayb muuqata oo deegaan.
Gudaha - habka oo lid ku ah deegaanaynta. Haddii aad rabto inaad hesho farsamo, waa habka samaynta rafcaan wax soo saarka gaarka ah ee adduunka weyn. Markaa, gudaha ka dhigista alaabtaada waxay ka dhigi doontaa alaabtaada racfaan wadareed. Meelaynta nuxurka waxa laga yaabaa inay gacanta la gasho caalamiyaynta.
caalamiyeynta - Tani waa erey caalami ah oo ah a dallada dhammaan hababkaas. Deegaan, caalamiyeynta, SEO-ga luqadaha badan, SEO-ga gobollo badan, kuwaas oo dhan waxay hoos yimaadaan ereyga ballaaran ee caalamiyeynta. Habka caalamiyaynta waa isku xidhka dhageystayaasha aduunka oo dhan, ha ahaato iyada oo la beegsanayo gobolo gaar ah ama ka mid noqoshada wada hadal caalami ah oo balaadhan. Meelaynta nuxurku waa qayb ka mid ah caalamiyaynta.
Sidee u wada shaqeeyaan? Haddii aad rabto in aad caalamiyeyso goobtaada WordPress, waxaad dooran kartaa in aad deegaan ka dhigto ama aad dhex geliso, in aad samayso luuqado badan ama gobolo badan, ama in aad samayso dhammaan.
Talooyinka ugu Dhaqanka ugu Fiican ee Goobahaaga WordPress
Markaa, waa kuwan hababka ugu fiican ee lagula shaqeynayo bogagga WordPress ee luqadaha badan ku hadla:
Kaliya ha turjumin
Hubi inaad isticmaasho hreflang tags
Isticmaal khariidadaha goobta ee luqadaha badan
Isticmaal meelaynta nuxurka
Samee cilmi-baaris ereyga muhiimka ah ee ku habboon gobolka
Maxaad Ugu Baahan Tahay Dhammaan Xeeladahan?
Hagaag, waxaad u baahan tahay gaadhis ballaadhan, dhammaan xulashooyinkani waxay kuu keenayaan gaadhid caalami ah - hadday tahay deegaanaynta luqadaha kala duwan ama haday ahaan lahayd dhagaystayaasha caalamiga ah.
Istaraatiijiyad SEO ah oo luqado badan ku hadasha, waxaad u baahan tahay dhammaan habaynta farsamada (sida subdomains iyo hreflang tags) iyo sidoo kale cilmi-baarista ereyga muhiimka ah iyo meelaynta nuxurka. Hase yeeshee, meelaynta nuxurku waxay laga yaabaa inay tahay mid ka mid ah qaybaha ugu muhiimsan ee istiraatiijiyadda nuxurka SEO ee luuqadaha badan, waxaadna u baahan tahay si la mid ah sida subdomains la turjumay.
Aan caddeeyo, meelaynta nuxurku maaha habka tarjumaada, inkasta oo ay qayb ka tahay dallada ay adeegyada tarjumaada bixiyaan, oo ay ku jiri karto tarjumaada. Laakin u turjumaada si fudud, ama ka sii daran, adoo isticmaalaya turjuma toos ah, oo loogu talagalay bogaggaaga luqadaha badan, waxaa laga yaabaa inay leedahay khalad dhaqameed.
Aan u soo noqono tusaalaha Ingiriiska iyo Maraykanka. Waxaad dhahdaa, waxaad tahay goob WordPress ah oo ku takhasustay shaaha. Mawduucaagu wuxuu taabanayaa labada UK iyo US ee ku hadla Ingiriisiga, daawadayaasha shaaha cabba. Barta Ingiriiska ee UK waxay lahaan doontaa macluumaad ka duwan kan Maraykanka - sida boostada baloogga oo qeexaysa asluubta wakhtiga shaaha galabnimada. Dhanka kale, goobtaada Mareykanka waxaa laga yaabaa inay lahaato macluumaad ku saabsan noocyada kala duwan ee shaaha Waqooyiga Atlantic. Markaad meelaynayso macluumaadkaaga sababo la xidhiidha kala duwanaanshaha dhaqameed ee gobolladaas, waxaad gaadhi kartaa labadaba isticmaalayaasha Ingiriisiga ku hadla.
Waxaad adigu meelayn kartaa macluumaadkaaga WordPress kaligaa, iyada oo loo marayo xeeladaha kor lagu soo sheegay, iyo adigoo isticmaalaya qaybta "Turjumida Bogga" ee WordPress.
Laakin, haddii aadan hubin, waxa kale oo aad dooran kartaa adeeg bixiyaha luqadda oo khibrad u leh gudbinta nuxurka luqadaha badan.
Waxaad isticmaali kartaa plugin WordPress ah oo ku takhasusay deegaanaynta, ama waxaad isticmaali kartaa adeegyada tarjumaada ee khibradda u leh. Waxaad weli u baahan doontaa inaad wax ka beddesho hababka farsamada oo aad wanaajiso waxa ku jira in kastoo. Haddii ay suurtagal tahay, qor tusmada sida caalamiga ah ee suurtogalka ah bilowgaba si aanay ugu baahnayn meelayn badan.
Habka SEO ee luqadaha badan ku hadla waa inuusan noqon mid khiyaano leh haddii aad diirada saarto dhagaystayaasha bartilmaameedka ah - dadka ay u badan tahay inay noqon doonaan macaamiishaada. Tani waxay tilmaami doontaa siyaabaha aad u wanaajiso nuxurka, iyo sidoo kale sida aad u isticmaasho luqadda iyo gobolka faa'iidadaada. Had iyo jeer maskaxda ku hay isticmaalaha, iyo, iyadoo la kaashanayo aqoonta farsamada qaarkood, waxaad u socon doontaa inaad noqoto khabiir SEO ah oo luqado badan leh.
Fahamka Isbeddellada ECommerce: Microservices Architecture
Lacag, Soo noqo! Sida Loo Joojiyo Lacagta Lagu Lumiyo Xeeladaha ABM